Ukwanda kokuqiniswa ukugwema imiphumela yezikhukhula | Isimo Sezulu Senethiwekhi
IsiJalimane Portillo | | Ukuguquka kwesimo sezulu, Izikhukhula
I-Andalusia ihlaselwe yizikhukhula ezimbi ngenxa yemvula enamandla ethathe isikhathi eside kulezi zinsuku. Kungenxa yalokho uHulumeni uvumele ezinye izinguquko emthethweni evumela ukuqinisa amandla okuphendula ezikhukhuleni.
Ingozi yezikhukhula iya ngokuya iba yimbi kakhulu ngenxa yemiphumela ye- ukushintsha kwesimo sezulu. Yingakho uHulumeni esebenzisa izinguquko emthethweni.
Isinqumo samukelwe ukuguqula imithethonqubo ye IHydraulic Public Domain kanye neHydrological Planning. Lezi zinguquko zizokwazi ukucacisa ukusetshenziswa komhlaba ezindaweni ezivame ukuba nezikhukhula ukuze kuqinisekiswe ukuphepha kwabantu nempahla. Ngaphezu kwalokho, izinguquko emthethweni zenza kube nokwenzeka ukuqinisa ukusetshenziswa kwe "Ukugeleza kwemvelo" futhi lokhu kuzokwenza ukuthi kumenyezelwe okusha izinqolobane zamanzi.
Lezi zenzo zenziwe ukuhlangabezana nezimfuneko esibekwe zona ku Umhlahlandlela Wokuhlaka Kwamanzi kanye Nomhlahlandlela Wokuhlolwa Kobungozi Bezikhukhula. Phakathi kwezenzo ezenziwayo ukukwazi ukubona ukusetshenziswa nemisebenzi esengozini kakhulu yezikhukhula. Ngalokhu kuguqulwa, lezi zindawo zizokwazi ukuzivumelanisa kangcono nemiphumela yokuguquka kwesimo sezulu, ngoba ukuhlelwa kwendawo okwanele futhi okunokwethenjelwa ngokwengeziwe kanye nokuhlelwa kwedolobha okuhle kuzokhuthazwa.
Lezi zinguquko kuhloswe ukuthi zikhule ukuqina futhi ngale ndlela sinciphise ukuba sengozini kwalezi zindawo ngaphambi kweziqephu zezikhukhula. Endabeni yokugeleza kwemvelo, ushintsho emithethweni ligcina isimo salo somthetho "njengomkhawulo ekusetshenzisweni kwamanzi kumasistimu okuxhashazwa" futhi ichaze izindlela zokuqinisekisa ukugcinwa kwazo, ukulawula kanye nokuqapha kwazo.
Ukubaluleka kokwandisa inani lamaHydrological Reserves ukuthi kubaluleke kakhulu ukugwema izingcindezi ezenziwa ezindaweni ezithile futhi lokho kungangcolisa amanzi okuphuza.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Izikhukhula » Ukwanda kokuqiniswa ukugwema imiphumela yezikhukhula
Izinyoni ezifudukayo ezingama-30% zifika eSpain ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu